I-Disney-Style Bundle isenokungabi ye-AT & T yeWarnerMedia kunye nokuFumanisa - Itv
Eyona Itv Kutheni iDisney's Strategic isenokungasebenzi kwiWarnerMedia-Discovery
Kutheni iDisney's Strategic isenokungasebenzi kwiWarnerMedia-Discovery
I-WarnerMedia-Discovery iya kude njani ngokuchasene neNetflix, iAmazon kunye neDisney.I-AT & T, iWarnerMedia, ukuFumanisa
NgoMvulo, i-AT & T yeWarnerMedia kunye neDiscovery Inc. ibhengeze iinjongo zabo zokudibana kwi-mega-media conglomerate entsha. Ngelo xesha, sasijonga kwakhona amanqaku amakhulu kunye nonogumbe wemibuzo eyayikhapha imeko yothusayo yemo-quo. Sikwaphonononge indlela inkampani edibeneyo enokuthi kwaye inokubetha ngayo umhlaba, kodwa inokujongana nemingcipheko kwimfazwe yexesha elide. Namhlanje, makhe singene kwindlela amandla okudibana awona mandla makhulu ngayo-imeko yokuhambelana kwenkqubo eyodwa yenkampani-inokuthi ingangqina ekugqibeleni ibe yingxaki kwikamva.
Njani iWarnerMedia kunye nokuFumanisa p Ukuhlelwa kwemigangatho kuyahambelana
IiLabhisi zeDiesel, iqonga lokuhlaziya umxholo elitsala idatha kubandakanyeko lwabaphulaphuli kunye nomdla kuwo wonke umdlalo wokuzonwabisa, wafumanisa ukuba iikhathalogu zomxholo weWarnerMedia kunye neDiscovery zidibana kakuhle. Ngokucacileyo, le yayiyinto ebalulekileyo enomdla kuzo zombini i-AT & T CEO uJohn Stankey kunye ne-CEO yeDiscovery Inc. uDavid Zaslav.
Umxholo weWarnerMedia uphumelela ngokubhekisele kuthethathethwano, uphethe i-8.7% yazo zonke izihloko ezitsha (imiboniso bhanyabhanya kunye nemiboniso bhanyabhanya) eza kuphuma kulo nyaka kwaye ivelise isabelo esikhulu se-20.2% sokuzibandakanya, u-Anjali Midha, umseki kunye ne-CEO yeDiesel Labs, uxelele uMbonisi. Ukufunyanwa kuphume ngokumalunga nomthamo, ubunini obumangalisayo be-17.2% yazo zonke izihloko ezitsha kulo nyaka (enkosi kwinxalenye yokuqaliswa kokuFumanisa + ebutsheni balo nyaka), kodwa ivelisa nje ngaphantsi kwe-1% yako konke ukubandakanyeka.
I-WarnerMedia kunye ne-Discovery abaphulaphuli badlula ngokuthozama nge-3.9% yabantu ababandakanyeka nomxholo ovela kwiinkampani zombini.
Malunga ne-60% yekhathalogu yokuFumana ekhutshwe ngaphezulu kweminyaka emithathu ukuya kwemihlanu edlulileyo yindlela yokuphila kunye nomxholo wokwenyani ngelixa ezi ntlobo zenza iipesenti ezi-3 zekhathalogu yeWarnerMedia. Indawo yangaphambili yindawo abanye abasasazi abakhulu bezama ukuyifaka kwi-SVOD yabo yokutyhala njengeendleko eziphantsi kodwa eziphakamileyo eziphezulu. Ukudityaniswa kwerekhodi yeWarnerMedia yenkqubo ye-premiere kunye neefilimu ze-blockbuster kunye nokudibana kwenza isixa esikhulu somqondo wobuchule.
Ngokudibeneyo, iWarnerMedia kunye nokuFumana i-26% yazo zonke izihloko ezitsha (kwimiboniso nakwimiboniso bhanyabhanya) kwi-2021-egqogqa inkokeli yangaphambili yeNetflix engumnini we-24% yazo zonke izihloko ezitsha, uMidha uyacacisa. IWarnerMedia ikwangasemva kwezona zihloko zili-10 zilindelwe kakhulu eziza kuphuma kulo nyaka, ngokweedatha zeDiesel Labs ( SpaceJam: Ilifa elitsha , Inkqubo ye- IQela lokuzibulala , kunye Kwiindawo eziphakamileyo ) -Ukukhokela ipakethi kwaye ubetha iDisney ngezihloko zazo ezimbini kuphela kwi-10 ephezulu Umhlolokazi omnyama , ULoki ).
Zombini ezi nkampani ziya kuba nakho ukwandisa icandelo labo lempembelelo ngoncedo lwenye njengoko ezi khathalogu zimbini zidibanisa iiprofayili zabaphulaphuli ezahlukeneyo. Iilebhu zeDiesel, iWarnerMedia ababandakanyekayo kwi-Male (56%) nangaphantsi (i-40% yabaphulaphuli ababandakanyekayo ingaphantsi kweminyaka engama-25 ubudala) ngelixa ukuFumanisa kugweba amaNina (ama-55%) enabantu abambalwa abangaphantsi kwama-25 (20%). Kuthelekelelo lweqonga, inkampani edibeneyo ngoku ikwindawo yesine kuthethathethwano kwiikhathalogu zomxholo phakathi kweenkampani ezinkulu zosasazo emva kweDisney, iNBCUniversal kunye neNetflix. Abanye banokuphikisa ukuba inkampani entsha ikhuphe i-NBCU.
Kutheni le nto kunokuba yingxaki
Ukuphambuka kolu lwandiso lwabantu kukunqongophala kwababukeli abafuna zombini, ezinokuthi zichonge ukuba inkampani entsha ipakisha njani ukuFumana + kunye ne-HBO Max. Isizathu sokuba iNkampani yeWalt Disney ibe yimpumelelo engazange ibonwe ngaphambili kunye nesiqwengana sayo sokusasaza-esidibanisa iDisney +, iHulu, kunye ne-ESPN + ye- $ 13.99 ngenyanga- sisibheno esiphambeneyo phakathi kwazo zontathu ezi nkonzo. I-WarnerMedia-Discovery ayibonakali ngathi iyaqhayisa ngesibheno esifanayo se-360. Ukufumanisa / iWarnerMedia ukugqitha abasebenzisi.IiLebhu zeDiesel
Abaphulaphuli beWarnerMedia kunye nokuFumana kugqitha nje ngokuthobekileyo nge-3.9% yabantu abazibandakanya nomxholo ovela kwiinkampani zombini, utshilo uMidha. Oku kubangela umceli mngeni kwinkampani edibeneyo njengoko ithathela ingqalelo iindlela zayo zokuhambisa umthengi ngokuthe ngqo-kuyo yonke imeko kuya kubakho imfuno eqhubekayo yokuFumanisa + (okanye ikhathalogu yomxholo wobomi) ngexabiso elisezantsi kuneHBO Max. Ngapha koko, akucaci ukuba ngaba kukho abaphulaphuli aboneleyo abanokuba nomdla wokufikelela kuyo yonke ikhathalogu 'ehlanganisiweyo', ngakumbi ukuba kuyabiza kuneHBO Max namhlanje.
Ngaphandle kwempumelelo yesiqwengana seDisney, uHulu kulindeleke ukuba ekugqibeleni asongelwe kwiDisney + kwixesha elizayo emva kokuba iDisney iphinde yaphinda isicwangciso sayo sokusasaza. Ukuba ayinakulondolozwa ixesha elide kumandla okusasaza akhula ngokukhawuleza kwihlabathi, kunokuba iWarnerMedia-Discovery isenokujamelana nokhetho olunzima ngaphambili.
Zombini iinyanda ze-HBO Max kunye nokuFumanisa + njengezinto ezahlukileyo kunye nokuzidibanisa kwinkonzo enye ephucukileyo ziza neenzuzo kunye nezibi. Kukubunkokeli obuphezulu obusandul 'ukusekwa ukuba buthathe isigqibo malunga nendlela eyiyo eya phambili.
La magama angama-20 ngawesondo, ngokweDating yokuDibana kwiiSwipe zasekunene
UTom Brady kunye noGisele Bündchen Ngaba bazingela izindlu kwiDolophu
'UPapa oMncinci' weNkulumbuso yeNkulumbuso: I-Cherry Coke Zero ukuya kwiCherry Coke Hero
Ngaba u-debbie ufumana isisu engenazintloni
iselfowuni yokubuyela umva simahla ekujongeni amaphepha amhlophe
indawo yokuthandana yasimahla e-usa
Eyona nto idaliweyo yokufumana izihlunu
ipilisi yokutya esebenza njenge-adderall